Ifulethi elihle ledolobha elizimele - I-Airbnb
Ifulethi elihle ledolobha elizimele
Lancaster, Pennsylvania, i-United States
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Gretchen
U-Gretchen Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elihle, elisha sha endaweni eyingqophamlando yedolobha lama-1880. Konke mayelana nalesi sikhala kusha sha; 12 ft. ophahleni oluphezulu olunokubumba komqhele, phansi ngokhuni oluqinile kulo lonke, futhi lufakwe kahle. Ngaphakathi kwebanga lokuhamba ukuya kuyo yonke into!
Uma sithi inefenisha ngokugcwele, sisuke siqonde! Ikhishi eligcwele ngokugcwele kusukela ku-cookware kuya ku-bakeware, izitsha, i-silverware, i-mixer, i-toaster, i-coffee maker, i-coffee grinder, i-microwave, i-blender, i-glassware, izitsha zokuxuba, isitoreji sokudla, kanye ne-service ware, ne-dishwasher. Kukhona newasha/isomisi esisha sha, ibhodi loku-ayina nensimbi, namalineni amaningi ombhede nokugeza. Ekamelweni, kukhona umbhede ophelele wosayizi wendlovukazi, izingubo zokugqoka ezimbili, isihlalo esishelelayo, i-iHome, isicoci se-vacuum, kanye nekhabethe elikhulu lokungena eline-hamper nama-hangers amaningi. Indawo yegumbi lokuphumula ifakwe unosofa wesigaba othokomele ngempela, amatafula okugcina, amalambu, itafula lekhonsoli kanye ne-TV yesikrini esiyisicaba esinekhebula eligcwele kanye nokufinyelela kwe-wifi. Siphinde sibe nomatilasi womoya owodwa noma ogcwele usayizi ogcwele uma uceliwe, womuntu owengeziwe. Kukhona umsebenzi wobuciko ezindongeni, futhi ukuhlobisa yonke. Endaweni yokudlela/ikhishi, kukhona amafidi ayisithupha, isiqhingi sangokwezifiso esinezihlalo ezine, isiqandisi esigcwele usayizi esinomenzi weqhwa, uhla lwengilazi olungaphezulu/uhhavini, nendawo enkulu yekhabhinethi. Akusekho okunye ongakufuna kuleli fulethi elizimele. Kukhona okokuwasha, okokuhlanza, amaphepha kanye nemikhiqizo yepulasitiki, ngisho nekhofi, itiye, ushukela, usawoti kanye nopelepele, njll. Uzokhululeka uma uphakamisa izinyawo phakathi nemizuzu emihlanu ufikile!
4.96 · 209 okushiwo abanye
Phakathi nokuhamba ibanga lenqwaba yezindawo zokudlela, izitolo zekhofi, imipheme nezitolo. Amabhulokhi amane kuphela ukusuka kumlando we-Lancaster Central Market (ovula ngoLwesibili, oLwesihlanu, noMgqibelo) kanye nezinye izingosi eziningi zomlando edolobheni laseLancaster. I-YMCA ingaphakathi kwebanga lokuhamba, cishe amabhulokhi amane, kanti isibhedlela iLancaster General Hospital siqhele ngebhlokhi nesigamu. Uma unentshisekelo yokuvakashela isonto, ngingakuthembisa ukuthi maningi. amasonto amaningi kuzo zonke izinhlangothi, iningi elingaphakathi kwebanga lokuhamba ukusuka efulethini. Kukhona nezindawo ezimbili zokuthenga zezitolo eziqhele ngamamayela amathathu kuphela, izinkundla zegalofu ezimbalwa, kanye nomhlaba omkhulu wepulazi kanye nohlangothi lwesifunda. Ngisho nesikhumulo sezindiza saseLancaster singaphansi kwamamayela ayishumi!
Umsingathi wakho unehhovisi ngaphakathi kwesakhiwo futhi ukhona isonto lonke lomsebenzi, uhlala imizuzu nje kuphela, ngakho-ke utholakala 24/7. Ngokuhlala isikhathi esingaphezu kweviki, izinsiza zokuhlanza ziyatholakala uma uzizwa uzidinga, ngenkokhelo.
Umsingathi wakho unehhovisi ngaphakathi kwesakhiwo futhi ukhona isonto lonke lomsebenzi, uhlala imizuzu nje kuphela, ngakho-ke utholakala 24/7. Ngokuhlala isikhathi esingaphezu kwe…
UGretchen Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Lancaster namaphethelo